Muraayadaha muraayadaha indhaha ee haweenka Poomized Lombard Pastel / Blue - Hanukeii
Lombard Pastel / Buluug
Maanaan abuuri karin aruurinta kaliforniya ee Kaliforniya adigoon garaacin wadada ugu caansan San Francisco: Wadada Lombard.
Waxaan ka helnay waddadan xiisaha badan, sida qof kasta oo soo booqda, naqshaddeeda gaarka ah iyo zigzag-ta asalka ah. Sideeda qalooca ee ka kooban wadada waxaa ku hareeraysan ubaxyo iyo jardiinooyin gacmeed, maskaxdeenuna waxay qiyaaseysay dhamaan skateboard-yada California iyo skaters-ka ka soo degi kara Lombard ST. Inuu ku dhaqmo dhaqdhaqaaqiisa oo uu horumariyo farsamadiisa, iyo sawirada cajiibka ah ee laga qaadi karo labadaba kor iyo salka wadada.
Waxaan si weyn ula yaabnay xaqiiqda ah in waddo gebi ahaanba gebi ahaanba ah oo isdaba joog ah oo goolal isdaba joog ah iyo fiditaan aad u gaaban, oo ay gawaarida ku dhex wareegayaan iyaga oo aan soo bandhigin wax dhibaato ah, ayaa guuleysatay waana mid ka mid ah xarumaha dalxiis ee ugu soo jiidashada badan San Francisco. Waxaan markaa ka warqabnay in xuduudihii hal-abuurnimo iyo asalnimaduba ay meesha ka baxeen oo fikrad kasta, haba u ekaato mid aan macquul ahayn ay u muuqato, in la fulin karo iyo, wixii intaa ka sii badan, in lagu guuleysto.
Wadada Lombard ayaa ina caawisay, mana ahan inaan la nimaadno naqshad aan kala sooc lahayn, oo aan maskax lahayn, laakiin waxay nagu dhiirrigelisay inaan wax cusub cusboonaysiinno oo aan ka duwanaano, oo aan ku tiirsanaano awoodda fikradaha wanaagsan. Naqshadaynta ururinta muraayadaha indhaha ee LOMBARD waxay ka bilaabmaysaa halkan, taas oo aannu doonaynay inaan ku siino dhawr qodob oo dhiirrigelin ah; Dhinaca kale, waxaan dooneynay inaan siino qaab dhismeed aad u ballaaran oo aan ku qalabeyno bilicsanaanta ay dhiirrigelisay isbeddellada moodooyinka Mareykanka ee 60-meeyadii.
Waxaan qiyaaseynaa Audrey Hepburn socodka wadada ugu caansan SF oo xiran muraayadaha LOMBARD oo ku jira goob madow iyo caddaan ah.
Hyde Madow / Madow
Hyde Madow / Madow 44.95 €
Hyde Camo / Madow
Hyde Camo / Madow 44.95 €
Hyde Green / Madow
Hyde Green / Madow 44.95 €
Lombard madow / Madow
Lombard madow / Madow 44.95 €
Lombard Tortoise / Madow
Lombard Tortoise / Madow 44.95 €